Betas in dropper, markan waa beta 4 ee watchOS 8.1 | IPhone news
Betas in dropper, markan waa watchOS 4 beta 8.1
Apple waxay sii deysay beta 4 ee horumariyayaasha watchOS 8.1 saacado ka hor. Noocan cusub waxa asal ahaan la bixiyaa hagaajinta cayayaanka laga helay noocii hore iyo hagaajinta xasiloonida ee nidaamka laftiisa. Noocyadan beta ee horumariyeyaasha la sii daayay saacadihii ugu dambeeyay, waxa Apple ay damacsan tahay inay ilaaliso xasiloonida ugu badan ee iyaga ah si ay awood ugu yeelato inay soo saarto nooca ugu dambeeya gudaha waqti gaaban. Noocyadan kama dambaysta ah ee dhammaan isticmaalayaasha ma iman doonaan ilaa ay suurtogal tahay bisha Janaayo.
Shakhsi ahaan, anigu ma ihi isticmaale isticmaala noocyada beta ee qalabka ka baxsan kuwa loo sii daayo Mac, mar walba waxaan ku rakibaa iyaga laakiin disk dibadda ah si aan uga fogaado dhibaatooyinka. Ikhtiyaarka lagu rakibo beta-yada cusub wax badan iguma jiidan sababtoo ah sifooyinka cusub ee ay ku daraan, uma eka inaan haysano isbeddelo badan waana sababta aan u arko inay ka fiican tahay inaan sugo nooca ugu dambeeya. Si kastaba ha noqotee, dhammaan kuwa horey u haystay noocii hore ee beta ee lagu rakibay Apple Watch si fudud waa inay sameeyaan cusbooneysii doorbidyada Apple Watch adoo adeegsanaya OTA iyo voila, waxay horey uheli doonaan beta 4 oo lagu rakibay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Betas in dropper, markan waa watchOS 4 beta 8.1
Kuwani waa ciyaaraha iyo abka ugu fiican ee 2021 ee ay bixiso Abaalmarinnada Dukaanka App-ka ee Apple